हार्दिक बधाई ! २२ बर्षकै उमेरमा शाखा अधिकृतमा फ्याट्टै नाम निकाल्नेको रजनीले दिईन यस्ता टिप्सै-टिप्स ।
रजनी रेग्मी : जुन दिन सेन्ट जे’भियर्स कलेजबाट पत्रकारिताबाट स्नातक तह उ’त्र्तीण गरेँ, त्यसैदिन मैले निर्णय गरेँ, निजामती सेवालाई आफ्नो करि’अरका रूपमा अँगाल्नेछु ।
सानैदेखि मलाई समसामयिक विषयवस्तुमा रुची थियो, त्यही कारणले गर्दा नै होला मलाई लो’कसेवाप्रति तृ’ष्णा जाग्यो ।
यही तृ’ष्णाले मलाई लगनशील बनायो  । तयारीका सम्पूर्ण चरणमा पढाइलेखाइमा मलाई कहिल्यै बोझको आभास भएन ।
म बाल्यकालदेखि नै कुनै पनि नयाँ विषयवस्तुप्रति जि’ज्ञासा
राख्थेँ । आफू ज’न्मेको समाजका बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो ।
पत्रकारिता विषय पढेकाले पत्रकारिताका अवधारणाले मलाई धेरै सहयोग ग¥र्‍यो । कुनै पनि विषयका आयाम खोतल्न सहयोग गर्‍यो । जस्तो पत्रकारितामा ‘पाँच–डब्लु, एक एच’ को अवधारणा छ ।
यसले कुनै पनि घटना के, कहाँ, कहिले, किन, को र कसरी भयो भन्ने अव’धारणा दिन्छ । २२ वर्षमा नाम निकालेँ मैले पहिलोपटक २२ वर्षको उमेरमा लोकसेवाको परीक्षा दिएकी थिएँ । त्यसको एक वर्षपछि नाम निकालेँ । धेरैले कम उमेरमै नाम निकालेको भन्थे ।
थप समाचार : डिजिटल ल्याण्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको शुरुवात गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक – प्रधानमन्त्री !
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले डि’जिटल ल्याण्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको शुरुवात गर्ने नेपालनै पहिलो मुलुक हुनसक्ने बताएका छन्। बिहिबार अनलाईन ल्याण्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टमका दुई वटा सफ्ट’वेयर ‘ल्याण्ड इन्फ’रमेसन सिस्टम’ तथा ‘मेरो कित्ता’ को औपचारिक उ’द्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
‘डिजिटल स्वाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको शुरुवात गर्ने नेपाल विश्वकै पहिलो मुलुक हो । यस्तो सिस्टम अरु कसैले पनि शुरु वात गरेका छैनन् । यसमा थप अहिले ल्या’ण्ड म्यानेज मेन्टमा समेत हामीले डिजिटल सि’स्टमको विकास गरेका छौं । यो पनि पहिलो हुन सक्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
त्यसो त यो सरकारले एक वर्षमा विकास निर्माणसँगै डिजिटल नेपालको क्षेत्रमा समेत तीव्र विकास गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘एक वर्षमा सगरमाथाको उचाइ नापिएको छ ।
यहीँ एक वर्षमा डिजिटल स्वाइल म्या’पिङ्ग सिस्टमको शुरुवात भएको छ ।
सोही एक वर्षमा डिजिटल ल्याण्ड म्यापिङ्ग सिस्टमको समेत विकास भएको छ भने, यो सरकारले गरेका उपलब्धीका कामहरु यी सूचकहरु हेरे पुग्दैन र?’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो सरकार मुलुकको तीव्र विकाससँगै प्रविधिको प्रयोगमा
समेत निकै अघि बढिसकेको छ ।’ सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रविधिको विकाससँगै अब सबै उत्पादनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए । यी सबै विकाससँगै प्रविधिसँग समेत नेपाल धेरै अघि बढिसकेको देखाउँछ ।
२०७८ बैशाख ७, मंगलवार २३:३१ गते 1 Minute 1210 Views